MW CMC Oo Kulan Layeeshay Wafti Kasocday Somaliland - Cakaara News
MW CMC Oo Kulan Layeeshay Wafti Kasocday Somaliland
Jigjiga(cakaaranews)Khamiis 14ka July 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay wehelinayeen afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq, madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan iyo mas’uuliyiinta kaladuwan ee hay’adaha amniga iyo cadaalada DDSIayaa maanta kulan layeeshay wafti kasocday somaliland oo uu hogaaminayay wasiirka arimaha dibada somaliland mudane Sacad Cali Shire oo ay kuwehelinayeen wasiirka arimaha gudaha ee somaliland mudane Cali Maxamed Warancade, Agaasimayaal iyo xubno kale.
Hadabaujeedada kulankan ayaa ahayd mid lagaga wada hadlayay sidii loo sii adkayn lahaa xaalada amniga xuduudaha labada dhinac. Taas oo ay dawlada federalka ah ee itoobiya iyo somaliland horay heshiis uga wadagaleen.
Waxaana ugu horayn furitaankii kulankan kahadlay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ugu horayn si xurmo leh u qaabilay una soo dhaweeyay waftigan islamarkaana kalahadlay sidii labada dhinac ay usii wada xoojin lahaayeen heshiiskii ay wadagaleen dawlada federalka itoobiya iyo somaliland oo ahaa nabadgelyo kuwada noolaanshaha, daris-wanaaga, adkaynta amniga xuduudaha, is-jacaylka iyo wadashaqaynta bulshada walaalaha ah ee labada dhinac. Wuxuuna madaxwaynuhu intaa kudaray in dawlada itoobiya iyo somaliland gaar ahaan DDSI iy Somaliland ay yihiin dad iskudan ah oo aan marnaba kala maarmin islamarkaana cidkasta oo iskudayda inay dhibaato kadhex abuurto dariska isjecel ee walaalaha ah aysan marnaba usuurtagalaynin oo ay hal meel ah uga soo wada jeedsanayaan Isagoo uga mahadceliyay dhaqan-galinta heshiiskii hore iyo kudhiiranaanta hirgalinta iyo wadashaqaynta tooska ah islamarkaana ku amaanay nabad jacaylka iyo walaalnimada reer somaliland. Ugudanbayna, madaxwayne CMC ayaa salaan u diray madaxwaynaha somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud (siilaanyo) iyo dhamaan shacabka reer somaliland.
Dhanka kale wasiirka arimaha dibada somaliland mudane sacad cali shire oo kahadlay kulankan ayaa ugu horayn bogaadiyay horumarka baaxada leh ee kajira deegaanka isagoo kutilmaamay mid kudayasho iyo in khibrad laga qaato mudan. Wuxuuna kamahadceliyay qaabilaadii iyo soo dhawayntii madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar isagoo sheegay inay dhaqan-galiyeen heshiiskii hore walina ay u taagan yihiin sii adkaynta nabadgalyada, dariswanaaga iyo is-jacaylka labada dhinac.
Sidoo kale wasiirka arimaha gudaha somaliland mudane Cali Maxamed Warancade ayaa bogaadiyay kulankan. Wuxuuna sheegay in cadawga itoobiya uu yahay cadawga somaliland islamarkaana cadawga somaliland uu yahay cadawga itoobiya. Wuxuuna balan qaaday in dhankooda uusan marnaba cadaw uga soo galaynin itoobiya sidii horay ay ugu taagnaayeen nabad kuwada noolaanshaha shacabka labada dhinacna ay usii xoojinayaan. Wuxuuna intaa kudaray in lagu sharfay siidaynta wariyihii HCTV ee Gobolka Gabiley mudane mukhtaar nuux oo iyaga lala sugayay.
Ugudanbayna kulankan ayaa kusoo dhamaaday jawi wanaagsan iyadoo labada dhinacba ay balan qaadeen kawada-shaqaynta nabadgelyada, daris-wanaaga, is-jacaylka iyo walaalnimada shacabka walalaha ah ee itoobiya iyo Somaliland.